SIMAD: Macallimiin PhD iyo Master dibadda ku soo diyaariyay oo la soo dhaweeyay-SAWIRRO – Radio Muqdisho
Maamulka Jaamacadda SIMAD wuxuu maanta xaflad soo dhaweyn ah u sameeyay 17 macallin oo soo dhammeysatay waxbarashada sare PhD iyo Master-ka, kuwaas oo ay jaamacadu horay u siisay deeq waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah.
Afar ka mid ah dadka ka faa’iideystay mashruucan ayaa soo qaatay PhD, halka saddex iyo toban kale ay soo qaateen master degree. Aqoonyahannadan ayaa wax ku soo bartay dalal ay ka mid yihiin Thailand, Malaysia, Uganda iyo Kenya. “ Waxaan u mahadcelinaynaa Jaamacadda SIMAD oo noo suurta gelisay fursaddan qaaliga ah ee aan waxbarashadeena sare ugu qaadayno” ayuu yiri Saalax Cali Xasan oo shahaaddada labaad ee Cilmiga Computer-ka ku soo diyaariyay waddanka Thailand.
Sidoo kale Dr. Bashiir Cabdisamad Xareed oo maaddada xisaabaadka ka soo diyaariyay PhD ayaa sheegay in fursadaha la siiyo dadka ee cilmigooda lagu kobcinayo uu si guud wax ugu soo kordhinayo bulshada Soomaaliyeed.
“Waxaan rabaa in aan halkaan ka cadeeyo in wixii aan soo baranay si daacadnimo ah oo karti ku jirto ugu shaqeyn doono bulshada Soomaaliyeed iyo jaamacadda SIMAD” ayuu yiri.
Gudoomiyaha Jaamacada SIU Dr. Yaxye Cali Ibraahim oo xafladdan ka qeyb galay ayaa sheegay in hay’adaha waxbarashada dalku ay kaalintooda qaadan karaan marka ay bixiyaan qiimo iyo dadaal joogto ah, tallaabada ay jaamacadda SIMAD ku soo saareyso aqoonyahanno gudaha ah ayuu ku sheegay mid lagu dayan karo si loo xoojiyo heerka tacliinta sare ee wadanka.
“Waa tusaale wanaagsan Jaamacadda SIMAD, waxaa fiican inay ku daydaan hay’adaha ka shaqeeya tacliinta sare ee dalka, iyadoo aan sidaa la yeelin wax lagama bedeli karo tayaynta waxbarashada dalka” ayuu yiri Dr. Yaxye.
Sidoo kale hormuudka jaamacadda Jazeera Dr. Ibraahim Xasan Maxamed ayaa yiri “Runtii waa talaabo geesinimo leh, waa talaabo amaan mudan, waa talaabo sharaf leh, waa talaabo ku dayasho mudan maxaa yeelay Jaamacadaha loogama baranin in ardayda dhameysata heerka koowaad ay siiyaan in ay fursad ay ku helaan heerka labaad iyo sedaxaad”.
Guddoomiyaha jaamacadda SIMAD, Daahir Xasan Carab ayaa u hambalyeeyay aqoonyahannada ka faa’iideystay deeqda waxbarasho ee ay jaamacaddu siisay,
Wuxuu caddeeyay in qorshaha jaamacadda uu yahay in sare loo qaado tirada macallimiinta jaamacadda ee haysata PhD iyo Master si bulshada ay wax badan ugu soo kordhiyaan.
“Istiraatiijiyada ah in la helo dad leh aqoon sare (jaamacadda) aad ayay ugu go’an tahay, waxuuna Jaamacadda qorshaheedu yahay in sanad kasta ay dirto 5 arday oo soo diyaarisa shahaaddada PhD, taas oo aan rabo hadduu Alle idmo in sanadka 2020-ka dadka PhD haysta ee Jaamacadan jooga ay gaaraan 20% halka ay maanta yihiin 6%” ayuu yiri guddoomiye Daahir Carab.
Sanadkii 2004, ayay jaamacadda SIMAD billowday mashruucan kor loogu qaadayo aqoonta macallimiinta, taas oo ay ka helayaan waxbarasho sare oo deeq dibadda ah, waxaa ka faa’iideystay 77 qof halka hadda ay dibadda ku maqan yihiin ku dhawaad 30 arday oo soo diyaarineysa shahaaddada labaad ee Marter-ka iyo waliba PhD.